उत्तम उत्पादन र वातावरणीय चेतना - BreatheLife2030
नेटवर्क अपडेट / पेरू / २०२०-१०-०2020
राम्रो उत्पादन र वातावरणीय चेतना:
किसानहरूले पेरूमा जलेको र संरक्षण कृषि अपनाउँछन्
मानोलो रोजास संरक्षण कृषि प्रयोग गर्न थाले किनकि उनी यस ग्रहको बारेमा चिन्तित थिए। तर जब उसको उत्पादन गुणस्तर र मात्रामा बढ्न थाल्यो, तब आसपासका किसानहरूले ध्यान दिन थाले।
दुई वर्ष अघि, मनोलो रोजासले आफ्नो खेतमा हरिया मटर रोप्दै थिए जुन उसले पेरूको मध्य भागमा रहेको थियो, जुन उनी सधैं गर्थ्यो, अघिल्लो बालीको भग्नावशेष जलाएर र माटो सम्म। जब मानवीय संगठन केयर ईन्टरनेशनलका एक प्राविधिकले उनलाई सम्पर्क गर्न बोलाए कि उसले राम्रो नतिजा प्राप्त गर्ने छ यदि उसले ती कुनै पनि काम नगरे ऊ श ske्कास्पद थियो।
“यो अतार्किक लाग्यो,” रोजासले भने। आखिर, यो कसरी थियो विश्वभरि किसानहरूले उब्जनी betweenतुहरूको बीचमा आफ्नो खेतहरू बदल्छन्। तर रोजसले आफ्नो खेतहरूको सतहमा चट्टानहरू देख्न थालेका थिए जसको अर्थ उनलाई थाहा थियो कि उनले माथिल्लो माटो गुमाउँदैछ, पोषक धनी माथिल्लो लेयर बलियो फसलका लागि आवश्यक छ। उनले मौसम परिवर्तनको बारेमा पनि चिन्ता गर्न थालिसकेका थिए जब प्राविधिकले उनलाई भने खुला कृषि जलाउने सबैको एक तिहाई भन्दा बढीको लागि जिम्मेवार थियो कालो कार्बन उत्सर्जन, एक अल्पकालीन जलवायु प्रदूषक जसले वायु प्रदूषण, मौसम परिवर्तन, र क्रायोस्फीयर (हिउँ र बरफको क्षेत्र) को बढ्दो पिघलनेमा योगदान पुर्‍याउँछ, उसको चासो हरायो।
मानोलो रोजास (बाँया) संरक्षण कृषि विशेषज्ञ एडेमिर कालेगारीको साथ
"हामीले प्रयास गरेनौं भनेर हामीलाई थाहा छैन," उनले भने। "त्यसोभए मैले यस प्राविधिकलाई मौका दिने प्रयास गर्ने निर्णय गरें।"
यो दुई बर्ष भयो र रोजासले आफ्नो फार्म र आफ्नो जीवनमा गरेको भिन्नता देखेर छक्क परे। न केवल ढु the्गा गएको छ तर उसले गँड्यौलाहरू र अन्य कीराहरू पनि अहिले धनी र गाढा माटोमा देख्न थाल्छ जहाँ उसले मकै, गाजर र अन्य तरकारीहरू रोपेको छ। अझ राम्रो, उनको उत्पादन या त उस्तै हो वा पहिले भन्दा बढी। उनले कलेजमा आफ्नी श्रीमतीलाई भेटे र उनको गृहनगरमा खेती गर्न थालेकाले उनले माटोलाई स्वस्थ देखेका छैनन्।
“म यो परियोजनाप्रति प्रतिबद्ध छु किनकि म जलवायु परिवर्तन र हामीले सामना गरिरहेका सबै जलवायु मुद्दाहरूको बारेमा चिन्तित थिएँ। मलाई थाहा छ यदि हामी वातावरणको ख्याल गर्दैनौं भने भविष्यमा कम उत्पादन र कम उत्पादनको सामना गर्नुपर्नेछ। अब मैले यो गरिसकेपछि मैले महसुस गरे कि यसको उत्पादन पनि बढेको छ र म यस बारे खुसी छु। ”
रोजासले सिकेको पाठहरू एक परियोजना द्वारा कार्यान्वयन गरिएको थियो केयर पेरु द्वारा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय संग अन्तर्राष्ट्रिय क्रायोस्फीयर मौसम पहल (आईसीसीआई) यसले किसानहरूलाई प्रशिक्षण र अध्ययन भ्रमणहरूमार्फत संरक्षण कृषिको बारेमा सिक्न मद्दत गर्‍यो।
मलाई थाहा छ यदि हामी वातावरणको ख्याल गर्दैनौं भने भविष्यमा कम उत्पादन र कम उत्पादनको सामना गर्नुपर्नेछ।
संरक्षण कृषि किसान, पेरू।
यो मौसम र सफा एयर गठबन्धन (CCAC) कृषि पहल क्षेत्रीय नेटवर्कहरू र प्रोजेक्टहरूलाई समर्थन गर्दछ जसले खुला जल विकल्पको अवलम्बन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यी “बर्न विना” विधिहरूको कार्यान्वयनले विश्वव्यापी कालो कार्बन उत्सर्जन आधा घटाउन सक्छ र साथसाथै रोजाजस्ता कृषकहरूलाई आर्थिक र सामाजिक लाभ प्रदान गर्दछ।
२०१ 2014 देखि, सीसीएसीले आईसीसीआईसँग काम गरेको छ यस समस्यालाई स्थानीय साझेदारहरू मार्फत समाधान गर्नका लागि पेरु र भारतमा प्रदर्शन परियोजनाहरु.
पेरूमा प्रदर्शन परियोजना CARE पेरू र को सहयोगमा लागू गरिएको थियो राष्ट्रिय कृषि इनोवेशन संस्थान पेरू को लागी।
संरक्षण कृषि विश्वव्यापी रूपमा छन, रोजाजस्ता किसानहरूको सफलताबाट प्रोत्साहित भयो जसले यस प्रकारका परियोजनाहरूमा भाग लिएका छन्। वास्तवमा, यसले पारम्परिक जुताई कृषिलाई प्रतिस्थापन गर्दै छ प्रत्येक वर्ष १० मिलियन हेक्टर फसल भूमि.
किसानहरू ñ बर्षेको संरक्षण कृषि प्लॉटमा जग्गाको कभर जाँच गर्दछन् केर्यु, पेरुको केयर पेरू अध्ययन भ्रमणका क्रममा। (फोटो: Odon Zelarayan)
अभ्यासमा शून्य वा धेरै न्यूनतम मेकानिकल गडबडी हुन्छ नो-टु-बीड बीउ भनिन अभ्यास मार्फत। अर्को रोपेको मौसमको लागि बालीनालीको अवशेष जलाउनको सट्टा, यसलाई कायम राखिन्छ र माटोको गीला कभरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ जसले यसलाई न्यानो राख्न मद्दत गर्दछ जसले यसलाई स्वस्थ बनाउँछ र कम क्षति हुने सम्भावना कम गर्दछ। यसले माटोको पोषक तत्व र लडाई कीटहरू र झारलाई अनुकूलन गर्न फसल रोटेशनको पनि प्रयोग गर्दछ। संरक्षण कृषिले सामान्यतया उत्पादन बढाउँदछ, मात्र यसले बालीनालीलाई चरम घटनाहरूको प्रति लचिलो बनाउँदछ, जसले यसलाई सम्भावित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीति बनाउँछ।
खुला जलाउने, जुन कृषि क्षेत्रमा सबै जानीजानी जलिरहेको रूपमा परिभाषित छ तर वन्य जग्गामा निर्धारित जलालाई बाहेक, केवल पेरूका किसानहरूले मात्र गर्छन्। पछिल्लो बालीनालीबाट अधिक कृषि स्ट्रु हटाउने सस्तो र द्रुत तरीकाको रूपमा यसलाई विश्वभर व्यापक रूपमा अभ्यास गरिन्छ। त्यहाँ एउटा गलत धारणा छ कि आगोले माटोलाई उर्वर बनाउन मद्दत गर्दछ तर यसले जैविक पदार्थलाई नष्ट गरेर पोषण तत्त्वहरू हटाउँछ। यसको अर्थ किसानहरूले आफ्नो बालीको उत्पादनलाई कायम राख्न मलखाद थप पैसा खर्च गर्छन्। संरक्षण कृषि किसानहरू प्रयोग गरेर गहुँको उत्पादनमा सुधार गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि, शुरुका दुई वर्ष भित्र १० प्रतिशतले.
खुला जलाउनु भारतमा ठूलो समस्या हो, जहाँ CCAC ले पनि अभ्यास हटाउनको लागि एक बहु-दृष्टिकोण अपनाइरहेको छकिसानहरुलाई शिक्षित गर्ने र वैकल्पिक पहुँचमा सहयोग पुर्‍याउने, आगोको निगरानी गर्ने र उपग्रहको प्रयोगबाट उनीहरुको प्रभाव ट्र्याक गर्ने, कृषि पराललाई फोहोरबाट संसाधनमा बदल्न सहयोग गर्ने, र राम्रो खेती उपकरणका लागि जलाउने नियम वा कृषि अनुदान जस्ता नीति हस्तक्षेपलाई समर्थन गर्ने।
पेरुको अकोबाम्बामा संरक्षण कृषि फार्ममा गहुँको परालमा बीन्स रोप्दै। (फोटो: Odon Zelarayan)
रोजास भन्छिन्, “म वातावरण विनाश गर्दैछु किनकि म जलिरहेको छैन र म जैविक पदार्थको हेरचाह गर्दैछु। "मैले जलाउनु अघि मैले वातावरणलाई प्रदूषित गरिरहेको थियो र आजकल म त्यस्तो गरिरहेको छैन र म यस बारे साँच्चिकै खुसी छु।"
उनी भन्छन् कि थप तत्काल र व्यक्तिगत लाभ पनि स्पष्ट छन्। “म फलफूल र तरकारीहरूसँग कि अधिक तौल र उत्तम स्वादको साथ उच्च गुणस्तरको उत्पादन पाउँदछु। म मेरा उत्पादनहरू मानवीय उपभोगका लागि बेच्छु, ताकि त्यो साँच्चिकै महत्व राख्दछ। ”
रोजास भन्छन् कि उनी र उनकी श्रीमतीले पनि बचत गरेको समयबाट फाइदा लिएका छन्, अब उनीहरू आफ्नो छोरासँगै बिताउन सक्छन् जो भर्खर कानून स्कूल पूरा गरे। त्यहाँ वित्तीय पुरस्कार पनि छन्। रोजासको अनुमान छ कि उनले प्रति हेक्टर २०० २०० डलर बचाएको छ किनकि उनले संरक्षण कृषि प्रविधि अपनाए किनभने रोपणको लागि जमिन तयार गर्न सजिलो छ। संरक्षण कृषिले खेती र सिंचाइबाट पैसा बचाउँछ जससँग उनीहरूलाई आवश्यक आवृत्ति कम गरेर। किसानहरूले मैन्युअल श्रम, ईन्धन, र मलमा save० प्रतिशत सम्मको बचत पनि गर्छन्।
रोजास एक्लो थिएनन्, यस परियोजनाले प्रभावशाली सफलताको दर पाएको छ, किनकि भाग रोजाजस्ता किसानहरूले नेतृत्वदायी र उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान गर्दछन् जहाँ कृषि कृषिले किसान र ग्रहको लागि सुधार गर्न सक्ने तरिकाहरू छन्। तालिममा सहभागी भएका farmers२ किसानमध्ये २ 32 जना अब जलाउँदैनन्। दुबै हरियो मटर र मकैको उत्पादन बढेको नयाँ खेती अभ्यासको परिणाम स्वरूप।
"मैले आफैले सुरु गरेको थिएँ तर म अरूलाई पनि परिवर्तनसँगै अग्रसर गराउन चाहन्छु," रोजासले भने।
किसानहरू अध्ययन टुरमा बदामको एक प्लट परीक्षण गर्छन्। अकोबाम्बा, पेरू (फोटो: Odon Zelarayan)
आईसीसीआई एन्डिस ओपन बर्निंग कोर्डिनेटर जुलियाना अल्बर्टेन्गोले भने, "मलाई लाग्छ कि म्यानोलो र अन्य किसानहरुमा मैले देखेको सब भन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू उनीहरुकै प्रोजेक्टभरि नै जान्थे।" “उनीहरूले आफ्नो दिमाग खोलेका छन् र तिनीहरूले व्यवस्थित रूपमा सोच्न सिकेका छन्। व्यक्तिगत बालीको सन्दर्भमा सोच्नुको साटो उनीहरूले सबै कुरा प्रणालीको रूपमा देख्न सिकेका छन् जसमा उनीहरूको आर्थिक मुद्दाहरू र जलवायु दुवै समावेश छन्। ”
यस विधिबाट त्यहाँ अर्को वातावरणीय फाइदा पनि छ, यसले पानी बचत गर्दछ। रोजास भन्छन् कि उनी प्रत्येक १०-१-10 दिनमा आफ्नो बालीमा सिँचाइ गर्थे तर अब उनीहरु धेरै लामो समय लाग्न सक्छ किनभने माटोमा नमी राम्रो हुन्छ किनकि बालीको अवशेषले यसलाई कभर गर्दछ।
“पानी यहाँ सीमित स्रोत हो र ती स्रोतहरू हराउँदैछन्। त्यसैले हामीलाई थाहा छ कि हामीसँग भएको स्रोतहरूको ख्याल गर्नु आवश्यक छ, ”उनले भने।
यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ जहाँ रोजासको हुवातापलाना ग्लेशियर हुआन्कायोका लागि पानी आपूर्ति गर्ने मुख्य स्रोत हो। विगत २० बर्षमा हिमनदीको हिउँ पर्ने क्षेत्र 20० प्रतिशतले घटेको छ र यसले पीडित पानीको मूल स्रोत नदीको लागि percent० प्रतिशत पानी उपलब्ध गराएको छ। खुला कृषि जलेको कालो कार्बन हिमनदीय गिरावटको प्रमुख कारक हो किनकि कालो कार्बन कणहरू हिउँ र बरफमा बसोबास गर्छन् र सतह अल्बेडो कम गर्दछ, वा सूर्यलाई प्रतिबिम्बित गर्ने क्षमता।
"यो बाल्टिनमा एक ड्रप भए पनि जब यो मौसम परिवर्तनको कुरा आउँछ, म अझै पनि यस बारे मा धेरै खुसी छु," रोजासले भने। "हामी बितेर जानेछौं र यदि आजकल केही गरेनौं भने हामी समस्या हाम्रा बच्चाहरूको लागि छोडिदिन्छौं ताकि हामीले भविष्यको ध्यान दिनु आवश्यक छ। त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ”
क्रस CCAC बाट पोस्ट गरियो